Piano Console Piano
Plume Portable Digital Piano
Ireo mpiara-miasa aminay
Plume Piano voafetra dia mpanamboatra fitaovana matihanina mirotsaka amin'ny R&D rindrambaiko, famolavolana vokatra, famokarana ary marketing amin'ny piano mahitsy, piano lehibe, piano nomerika ary piano manan-tsaina. Plume dia manana ny fahaizany mamokatra piano mahitsy 10.000, piano lehibe 1.500, loharanom-peo sy fitendry 400000 fitendry, pianô manan-tsaina 20 000 ary piano nomerika 150.000 isan-taona.
Plume dia manana ny patantin'ny zon'ny fananana ara-tsaina sy ny marika tsy miankina, ivon-toerana fikarohana injeniera manan-tsaina, izay manana rafitra famolavolana, famolavolana tsindrona, metaly, fitsapana feo ary fifehezana isa. Manana fiaraha-miasa 12 taona amin'ny andrim-pikarohana manerana an'izao tontolo izao izahay, hanomezana ny mpanjifa traikefa manan-talenta, mahaolona ary mavitrika amin'ny fampianarana mozika, mitendry zavamaneno, miasa, miaina, mampiala voly ary mitsabo.
Ny marika marika Phoenix, Future Star antsika ihany koa dia marika malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary izahay koa dia manao OEM sy ODM ho an'ireo orinasa manerantany. Ny vokatray dia atolotra any Etazonia, Alemana, Italia, Rosia, Brezila, Aostralia .Hongkong sy firenena 50 sy faritra hafa, manana modely 20 momba ny famoronana sy ny mombamomba anay izahay. Plume dia mampiasa mpitendry zavamaneno malaza eran-tany, ny filohan'ny sendikan'ny Symphony China taloha Andriamatoa Bian Zushan ho mpanolo-tsaina kanto, ilay pianista tanora Ramatoa Cui Lan ho fankatoavana ny olo-malaza, ny mpahay siansa Andriamatoa Liu Yuliang ary Andriamatoa Li Xiaodong ao amin'ny Akademia siansa momba ny siansa (CAS ) amin'ny maha mpanolotsaina teknika azy, ny manampahaizana manokana momba ny akustika amin'ny fifandraisana ary ny injeniera zokiny Atoa Yu Jilin ho talen'ny teknika, izy rehetra dia afaka manohana matanjaka an'ireo marika sy kalitao rehetra.
Amin'ny maha orinasa fampiroboroboana nasionaly tsara sy teknolojia avo lenta ny indostrian'ny kolontsaina nasionaly, Plume dia mifantoka amin'ny famoronana ny faharanitan-tsaina, ny famolavolana vokatra, ny kalitaon'ny feo, ny sisintany ary ny fampidirana loharano. Miaraka amin'ny R&D mandroso, fahaizan'ny famokarana mahery vaika, rafitra fitantanana kalitao manara-penitra, mitondra fitaovana andian-dahatsoratra feno ao an-trano sy any ivelany, i Plume no mpanamboatra piano piano manerantany. Manana ekipa mahay mamolavola sy mpamokatra izahay hitazomana ny kalitao sy ny fanavaozana ny rindrambaiko sy ny fitaovana.
Fanamarinana ny rafitra fitantanana ISO9001: 2015, ISO14001: 2004 Rafitra fitantanana tontolo iainana, GB / T28001-2011 Rafitra fitantanana fahasalamana sy fiarovana amin'ny asa, 3C, GS, TUV, RoHS, CE, FCC ary UL no antoka miantoka ny fampandrosoana hatrany ny orinasanay. Plume no mpamatsy voalohany amin'ny zavamaneno manan-tsaina, ny mpiara-miombon'antoka sy ny mpanjifantsika dia mahazo tombony amin'ny tsy fananana traikefa manan-karena sy fahaizana manokana, fa koa ny fampiofanana sy ny fanohanana ara-teknika natolotry ny mpiasa mamiratra, manam-pahalalana sy marina. Plume dia manolo-tena ho orinasa miavaka amin'ny sehatry ny zavamaneno manan-tsaina.
Hanome anao ny valiny haingana, ny sosokevitra arak'asa ary ny teny nindramina tsara indrindra ny ekipanay. Tongasoa ny fangatahana!
Adress: làlana 30 Jiangda, Distrikan'i Jiangan, Tanànan'i Wuhan, faritanin'i Hubei, PR Sina
Ny mahasamihafa ny piano niomerika sy ...
Na dia ny fanafoanana ny sasany aza ...
Fanamboarana Piano Digital, Kitendry Piano Smart, Piano Digital Upright, Piano mandeha amin'ny herinaratra, Electric Grand Piano, Piano nomerika lafo vidy,